दियाको मोबाईल ‘सोनी एक्पेरिया प्रिमियम’ - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२८ पुष २०७४, शुक्रबार १६:५६
रामबाबु गुरुङको निर्देशन रहेको सिनेमा ‘मिस्टर झोले’ पौष २८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको छ । टेकेन खड्का निर्माता रहेको यस सिनेमामा अभिनेत्री दिया पुन मुख्य महिला पात्रको भूमिकामा छिन् । यहि सिनेमाको प्रचारप्रसारको क्रममा हामीसाग भेट भएकी दियाँसग हामीले ग्याजेट गफ गर्ने अवसर पाएका छौँ ।
दिया सोनी एक्पेरिया प्रिमियम मोबाईल बोक्छिन् । उनको मोबाईल सबैभन्दा धेरै ईन्स्टाग्राम र ईमेल चलाउन प्रयोग हुन्छ । किनभने एजेन्सीबाट काम आईरहेको हुन्छ यहि कारण उनी ईमेल बढी चलाउँछिन् । यसका साथै उनी विभिन्न मेमोरीहरु कैद गर्नको लागि पनि मोबाईलको प्रयोग गर्छिन् । सामान्यतया मोबाईलसँगै चार्जर, ईअर फोन र पावर ब्यांक बोक्ने दियाले मोबाईलमा भएका तस्बिरहरुको कुरा गर्दै आफ्ना दुईवटा छोराको तस्बिर पनि देखाउन भ्याईन् । खासमा उनले दुईवटा बिरालो पालेकी छिन् । यी दुईलाई उनी छोरा भन्न रुचाउँछिन् ।
लण्डनमा हुँदा उनी धेरैजसो समय दुईटा बिरालोसँगै बिताउँछिन् । उनले ती दुईवटा विरालोको नाम पनि राखेकी छिन् । एउटाको नाम मिडनाईट र अर्कोको नाम वीरबहादुर । उनले ठूलो बिरालोलाई ठूलो छोरोको संज्ञा दिँदै मिडनाईट भनेर अंग्रेजी नाम राखिदिएकी छिन् भने सानो विरालोलाई उनले नेपाली नाम वीर बहादुर राखिदिएको बताईन् ।
दियाको मोबाईलमा सबैभन्दा धेरै डायल हुने नम्बर ? यसको जवाफमा उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा छु भने मेरो बाजेको हुन्छ । किनभने कामको शिलशिलामा धेरैजसो बाहिरै हुन्छु त्यस कारण उहाँले पीर गर्नुहुन्छ र फोन भईरहन्छ । अनि उता लण्डनमा हुँदा भने मेरो ममीको हुन्छ । म कहाँ छु के गर्दै छु सबै अपडेट गराईराखेको हुन्छु त्यस कारण ।’
साराको मोबाईलमा धेरै डायल हुने नम्बर कस्को ?
रोमाको मोबाईलको काम सेल्फी लिने
यूमिडिजी फोन बोक्ने केकी